Fiaramanidina shiliana miaraka amina mpandeha 38 ho any Antarctica no nambara fa 'nianjera'
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fiaramanidina shiliana miaraka amina mpandeha 38 ho any Antarctica no nambara fa 'nianjera'
Fiaramanidina shiliana miaraka amina mpandeha 38 handeha ho any Antarctica no nambara fa 'nianjera'
Shiliana fiaramanidina fitaterana mankany amin'ny Antarctica ary mitondra mpandeha sy ekipa 38 dia heverina ho "nianjera" satria efa ho lany ny solika ankehitriny ary tsy afaka mandeha intsony, hoy ny talen'ny hetsiky ny tafika an-habakabaka Chilean, ny jeneraly Brigadier jeneraly Francisco Torres. anio
Nisy ny fikarohana sy famonjena famonjena taorian'ny nahitana fiaramanidina fitaterana miaramila iray, very fifandraisana tamin'ny onjam-peo ho any amin'ny toby iray any Antarctica.
"Misy foana ny mety" fa nahavita niantsona tany ho any, hoy ny jeneraly Brigadier Francisco Torres, ary nilaza fa tsy nandefa antso nampahory ilay fiaramanidina.
Ny sambo fitaterana C-130 Hercules dia nanala ny Chabunco Air Base tao an-tanànan'i Punta Arenas any atsimon'i Shily tamin'ny 4:55 hariva ny ora teo an-toerana ny alatsinainy teo ary nivoaka tanteraka ny radara adiny iray taty aoriana. Manidina amin'ny iraka fanohanana sy fikojakojana mahazatra any amin'ny Base Eduardo Frei Montalva Air Base any Antarctica izy io, ary olona 38 no tao anatiny.
Ny filoha Sebastian Pinera dia nanambara ny asa fikarohana sy famonjena izay mifantoka amin'ny fitadiavana ireo mety ho tafavoaka velona. Ny toerana misy ny fiaramanidina dia mbola tsy fantatra.
Ny Base Eduardo Frei Montalva Air Base no lehibe indrindra amin'ny fametrahana efatra maharitra an'i Shily ao amin'ny kaontinanta misy ranomandry, izay nitakian'ny firenena ny sombin-tanety manarona ny Nosy South Shetland, ny Peninsula Antartika, ary ireo nosy hafa mifanila aminy.
Ny base dia tohanan'ny kaominin'ny Villa Las Estrellas, izay misy mponina manodidina ny 150 amin'ny fahavaratra - eo anelanelan'ny Oktobra sy Febroary - ary 80 fotsiny mandritra ny taona.
Fitsangatsanganana amerikana: USMCA dia hanana tombony mazava ho an'ny toekarena amerikana
Cabo Verde Airlines dia nandefa ny sidina Cabo Verde-Lagos, Nizeria